Ungashandisa sei Amazon Marketing Services kuwedzera purofiti yako?
Kana uri kutengesa zvigadzirwa zvako kuAmazon, chinangwa chenyu chikuru chinogona kuisa zvinhu zvako pamberi peavo vangave vatengi vako, uye pakupedzisira inowedzera mari yakawanda. Iyo yose Amazon inoshandiswa kushandiswa kwegoridhe yakagadzirirwa kupa vatengesi vane mhinduro dzakarurama kupfuura dzose zvichienderana nezvinodiwa uye kutsvaga nhoroondo. Saka, zvinhu zvose zvaunoda ndekutevera Amazon mazano ekuratidza zvinhu zvako zviri pamberi pevatariri vako.
Pasinei nemagadziro ako emazuva ano, haambotambudzi kuongorora zvaunogona kuita. Nenzira yakanaka, Amazon inopa vatengesi nemasangano akasiyana-siyana anokwanisa kugadzirisa mararamiro avo ekutengesa uye anounza mari yakawanda kuAmazon - cool text 3d logo design. Purogiramu yeAmerican Marketing Services ndiyo yakasarudzwa yakakwana yevatengesi veAmazambique vari kutsvaga mikana yekuwedzera kutengesa kwavo uye kukurudzira mabhizinesi ose emari.
Zvisinei, iri kukwira mubvunzo kana iwe uchida kuedza maitiro matsva ekutengeserana kana kuramba uchishandisa nzira dzako dzakaratidza. Asi kana iyo nzira itsva yekudhinda ichaonekwa zviri nani? Saka, ndinofunga zvakakosha kuedza Amazon marketing services kuti igare pane TOP of e-commerce game. Saka, ngatitaurirei zvinobudirira uye zvakanakira ma AMS kuti tinyatsonzwisisa kana zvakakodzera kukohwa kana kwete.
Amazon Marketing Services: iyo inoshanda
Amazon Marketing Services (AMS) mberi kwevatambi vakatarwa zvichibva pane zvakatsvaga kutsvaga mazwi, zvigadzirwa, zvido, uye nhoroondo yekutengesa.
Amazon Marketing Services program inopa mikana inotevera yebhizimisi:
Musoro wekutsvaga kutsvaga;
Inotsigirwa michina yemashamba.
Pakutanga AMS purogiramu yaive inowanikwa kune vaAmerica vatengesi. Zvisinei, mitemo yakashandurwa, uye mazuva ano inowanikwawo kuti ibudise pachena vatengi vebhuku uye vamiririri vatengesi. Zvisinei, inofanira kutaurwa kuti vatengesi vanofarira AmaAmazon Marketing Services vanofanira kunge vari vatori vechikwata che Amazon Vendor Central platform. Izvi zvinoshandiswa pakugadzira zvakasikwa kuti zvigadzire zvakatarwa, uye mazita ekutsvaga mazita ekutengesa ma Amazon. Amazon inoshandisa database yakawanda kuti ifanane nevatengi vane ads vanofunga kuti shopper ichagadzirisa nayo. Amazon inounganidza dhiyabhorosi yeruzivo rwakapfuura neAmazon uye inofamba nenzira iyo vatengesi vachitsvaka chimwe chinhu pachikuva. Saka, uchitora zvose izvi, iwe unogona kuwana matanho ako pamberi pevatengi vako vangave vanofarira mune zvigadzirwa zvakafanana neyako.
Unogona kutarisa mushandirapamwe wako wokutsvaga kuburikidza neIndaneti yeMushambadzi weUnited Marketing Services. Izvi zvinokubvumira kuti uone zvaunowana uye mari yekutengesa kwega imwechete kuitira kuti iwe ugone kuongororwa nyore nyore kudzoka kwako pazvikwereti. Uyezve, iwe unogona kutarisa mari yekudhura yekutengesa uye ona kana mushandirapamwe wako unobatsira kana kwete.
Zvisinei, iyi purogiramu yeAmazon inewo zvinetso zvayo. Izvo zvinyorwa zve AMS hazvisi kushandiswa-kushandiswa. Iwe haugoni kunyange kubvisa zviziviso zvinopedzwa. Uyezve, zvinyorwa zvekupa ruzivo zvinowanzoshanda zvishoma.